Famolavolavolana Teny | Solosaina Teknolojia Global Lahatsoratra Vohikala.WS | GVMG - Global Viral Marketing Group
PHP ra fintinina Amin'ny teny Iray
Solosaina Teknolojia Global Lahatsoratra Vohikala.WS > Famolavolavolana Teny
Raha toa ka ianao no nandany ny fanatsarana ny ampahany farany ny taona vitsivitsy amin'ny Aterineto, mety efa chanced andro ny fe-potoana PHP. Mety efa eny fa na tojo ny famaritana ny: server-lafiny scripting teny. Fa inona marina midika ve izany? Ary ny zava-dehibe kokoa, inona no afaka mampiasa izany ho anao amin'ny maha-hoy ny Tranonkala developer na mpanome endrika Tranonkala? Miverina ny famaritana ny kely kosa, Ny PHP dia marina tokoa server-lafiny scripting teny izay typically ampiasaina amin'ny fananganana ny fahavitrihana Tranonkala...
Ny PHP, Hianatra Zava-Baovao
Raha ny zavatra toy ny ankamaroan'ny fiaraha-monina, ary anisan'izany ny tenako, ianao tsy mety mampiasa ny kely kokoa ny lazan'ny amin'ny lafiny sasany ny solosaina. Eto, Nanapa-kevitra aho ny mba jereo "Ny PHP". Eny fantatro, izany no hoy aho, "Eny marina!", nefa tsy izany confusing rehefa ianao mijery azy kely akaiky...
Inona Com Sy Ny Fomba Ataony Mifandraika Amin'ny Rejistra Madio
COM dia misy fanafohezan-teny ho an'ny Singa Zavatra Modely. Io rindrambaiko momba ny maritrano namolavola avy amin'i Microsoft Corporation sy ampiasaina hamaritana sasany rafitra hanamboarana fandaharam-ieren-doza, fantatra ho toy ny zavatra izay afaka ny ho antsoina hoe miakatra ho an'ny famonoana tamin'ny fikandrana miorina ny tontolo iainana. COM dia voalohany voatsangana ho Fikandrana 95 ary Windows NT.4.0. amin'ny faritra maro ny Varavarankely rafitra ampiasainao sy ny rindranasa sasany dia mivoatra araka ny Microsofts mpandraharaha efa natsangana tamin'ny COM zavatra. Com Zavatra ireo dia voatahiry ao ...
Lamp mampiantrano dia tolotra ho an'ny tranonkala izay mampiasa LAMP fampandrosoana. LAMP dia fanavondronana ny teknolojia fa delineate vohikala mpizara infrastructures, famolavolavolana hanaraka ny modely ho an'ny fampandrosoana ny rindrambaiko sy ny fametrahana ny rindrambaiko fizarana. Ireo rindrambaiko malalaka ny fandaharam-packaged miaraka ary ampiasaina mba handefa ny vohikala. Lamp dia fanafohezana ny hoe ny manaraka: Linux malaza misokatra license rafitra ampiasainao, izany dia mitovy amin'ny UNIX ny rafitra fa tsy manana UNIX code satria ny UNIX operating s...
Orinasa Mijery Miaraka Amin'ny Teknolojia
Ny fifadian-pace teknolojia sy ny fisian'ny Aterineto dia manome mihoatra fotsiny tsotra mpitsidika sy ny fivoriana vaovao avy na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Ny Aterineto dia manome fahafahana manatanteraka ny fandraharahana sy ny vola-manao endeavors ho an'ny olona izay manana knack ny entrepreneurialism -tahaka ny fihetsiky mahazo mankeo amin'ny fandraharahana sy ny fianarana ny taham-miverina avy any maka ho toy izany. Nomena vintana, vahoaka sy ny teknolojia adept ny olona dia surf ny aterineto mba hahita ny vari...
Open Source Ny Tsy Fisian'ny Fikarakarana Ny Rindrambaiko Ao Php Sy Ny Mysql Fampandrosoana
Tombontsoa open source fanafangoana sy ny fikojakojana ny fitantanana ny softwares misy manampy, tetikasa sy nanatanteraka ny fomba isan-karazany nandray anjara tamin'ny asa amin'ny orinasa iray.
Ny Php Sy Ny Mysql Famolavolavolana Filaminana
Ny fisafidiana ny php sy ny mysql ho famolavolavolana teny ho an'ny vohikala dia tsy ampy. Amin'ny open source fanafangoana ny maha-iray ny inherent toetoetry php mysql fampandrosoana, fiantohana ny codes lasa tena
Fitakiana tena ho fianarana ity famolavolavolana teny, PHP Fanazaran-tena Tanjona, Prerequisites Ho an'ny Fanofanana ary Mazava loatra ny Antsipiriany
Ny fisafidiana Ny tonga Lafatra ny Tranonkala ny Fampandrosoana ny Orinasa Ho an'ny PHP Sy Mysql
Misy innumerous fikambanana izay havoaka ny php sy ny mysql tranonkala fampivoarana ny tolotra. Nefa amin'ny farany ny safidy dia ho nataon'ny ianao. Tsy mahazo perplexed araka ny isan'ny orinasa, milaza ho tsara indrindra ny fandraharahana. Consult ho an'ny manam-pahaizana manokana ny fanampiana alohan'ny fanaovana ny farany ny safidy.
Ny PHP Sy ny Mysql Fanofanana
[object Window]: [object Window]. Ny PHP
Ao amin'ny tontolon'ny tranonkala fampandrosoana, ny safidy izay ny fampandrosoana ny teny ampiasaina iaraha-dia midina roa malaza hanavaka ny safidy. Rindran'asa, indrindra moa fa ireo izay relying on back faran'ny soratra fototra, dia typically ny maha-noforonina fampiasana na ny Microsoft ASP.Net teny, na ny Open Source safidy teny amin'ny PHP. Antony iray dia mety hisafidy ny iray mihoatra ny hafa dia afaka mampiditra: Ny vidin'ny fitaovana fampandrosoana, na ny fisian'ireo toy izany fitaovana, na ny tena izy migalabona anaty fahafenoana sehatra miaraka amin'ny Sokafy ny Gidragidra...
Tsy maintsy-hahafantatra ny momba ny solosaina sy ny aterineto raki-teny
Solosaina Sy Ny Aterineto Raki-Teny
Rehefa mampiasa ny solosaina sy ny Aterineto ao amin'ny fandraharahana, izany rehetra izany ihany koa ho mora ny manomboka mahatsapa toy ny ianao drowning tao anaty ranomasina ny dikany. Solosaina mifandraika amin'ny zavatra tsy mirona manana ny teny rehetra ireo manokana, ary raha toa ianao tsy mila ho fantatry ny rehetra izany, maro ny confusing teny sy ny fehezanteny fa ianao andeha ho tonga manerana alohaloha na taty aoriana. Indro faingana primer.
Diy Mpitari-Dalana Mba Hisafidianana Ny Zo Fitaovana Ho Fototry Ny Tetikasa
Toy ny olona rehetra, izay remodeled ny tranony, dia hilaza aminao fa ny fisafidiana ny zo fitaovana ho amin'ny zo hahazo ny asa no tsy mampitovy azy. Mitovy ny fanambarana mihatra rehefa nisafidy ny zo fototra ho an'ny tetikasa. Ny sasany ny soratra fototra dia fototra, ny sasany dia herim-operated ary ny sasany tsitoha fahefana fitaovana. Ireto ambany ireto torolalana amin'ny fisafidianana ny tonga lafatra fototry ny zo tetikasa. Rehefa ianao ihany no mila mitahiry iray voafetra ny habetsaky ny angona ary mila haingana sy mora fampandrosoana ny sangodina, [object Window].
Aterineto Gaming Avy amin'ny FOTAKA ny Arcade
Roapolo taona lasa izay, Izaho nipetraka tany ny rahalahiko-in-lalàna den mijery ny dimy taona Philippe soundly trounce ny renibeko tao ankafiziny lalao Pac Lehilahy. Rehefa ny fahatelo successive handresy, Phil nanome ny renibeko iray puzzled jereo ary nanontany, [object Window], ,, didnt ianao mamaky Pac Lehilahy rehefa ianao no zanako?
Tselatra manokatra fikandrana vaovao sy fahafaha-manao ho an'ny lalao designers
Tselatra no misy ka ny sehatra fa tsy dia mahery vaika design sy ny sary mihetsika ny fitaovana miaraka amin'ny iray mihetsiketsika scripting milina, bitmap fivoakan'ny endri-tsoratra, toy izany koa ny avo lenta ny video sy ny audio famakiana. Misy telo fototra amin'ny lafiny: ny mpilalao, ny lamin, ary ny authoring fitaovana/IDE. Tselatra ny lalao afaka mivoatra ho an'ny vohikala, [object Window], toy izany koa ny handheld periferika. Tsy misy mila adopt maro famolavolavolana fitenim mba hananganana ny lalao.
Mandraikitra ny fotoana mivoatra mahomby sy madio mpivatsy ny mpizara ny vokatra any .NET ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny tena ihany .NET code amin'ny mpivatsy sy mpizara anisan'i ho FTP, [object Window], ary POP3 ny arofenitra.
[object Window]: Hiaro Ny Fiainana Manokana
Inona no Spyware? Nafoiko isaina ny isan'ny fotoana izay isika no antsoina hoe hivoaka ny fanamboarana manokana ny solosaina sy nahita fa ny rafitra no simba araka ny "[object Window]". Spyware dia Aterineto jargon ho an'ny dokam-barotra an-tànana software
Ny fomba mora miaro ny tranonkala tsy misy famolavolavolana fahaiza-manao
Ny mpikambana ao aminy ny Mpandrindra Plus no easiest fomba ny teny fanalahidy hiaro ny vohikala amin'ny faritra, mandahatra ny hira rehetra ny mpikambana ao, mandrindra ny vohikala registrations ary ny maro hafa. Ny fototra ijoroan'ny ny fiarovana ny rafitra fanaraha-maso ny lainga nampiasa rakitra .htaccess/.htpasswd, izay heverina ho ny mahery indrindra sy state-of-the-art laha-tahiry ny fiarovana ny rakitra.
Mitady Ny Tsara indrindra PDF Ho Soratra Fivadihana Fitaovana
Converting PDF rakitra ho toy ny mahazatra ny raki-tsoratra dia ny iray iraisana ny olana maro ireo mpampiasa izay handrisihana ity lamin ho fanohanana tahirin-kevitra fifanakalozana. Soa ihany fa, maro ny PDF ho soratra fivadihana fitaovana efa mivoatra.
Ny Php – Voalohany Jereo
Ny PHP: Hypertext Ratsy dia server-lafiny tranonkala famolavolavolana teny fa blends seamlessly ny HTML. Ny PHP dia afaka mandeha amin'ny samy Unix sy ny Fikandrana mpizara, izay no mahatonga azy mbola azo idirana kokoa noho ny Fikandrana counterpart, Miasa Ny Mpizara Pejy ([object Window]). Tena feno-service web design firms no manana farafahakeliny ny iray amin'ny PHP miteny guru. Ny PHP dia mampiasa no miparitaka be, ary mety tafiditra ao amin'ireo karazana mpizara functionality fa mila ireo mpampiasa fidiran'ny sy displays na manipulates ny fidiran'ny. Ny sasany pertinent ohatra tahaka izany ny asa ...
Aiza Isika Andeha: .[object Window]?
Izany wasnt ela akory izay fa ny rindranasa no natao, mivoatra, ary nanaparitaka jiolahimboto iray tokana milina. Ho anareo izay afaka mahatsiaro ny andro voalohany ny solosaina manokana vanim-potoana, zavatra toy dbase, [object Window], sy ny toy mety ringa iray feon'ny. Ny zava-drehetra mihazakazaka amin'ny milina io -- ny mpaneran'ny mpampiasa, ny fandraharahana fitsipika, ary ny fototry ny tolotra.
Tao amin'ny tontolon'ny Aterineto, misy indrindra ny tena zavatra izay tranonkala pejy. Rindran-ampiasaina mba hanova ny pejin-tranonkala araka ny tokony ho izy ny teny tonian'ny toy ny Notepad.
Web design vahaolana
Aterineto vahaolana sy ny web design.
Saika ny zava-drehetra hita ao amin'ny Aterineto amin'izao fotoana izao, ireo lahatsoratra, vaovao, boky, [object Window], rindran'asa sy ny tena nisintona MP3 hira mpanome. Mampidina free MP3 ao amin'ny aterineto dia mitaky anao hametraka rakitra-ny fizarana rindrambaiko. Ny iray mahatsiravina misy ny hoe MP3 rakitra fizarana rindrambaiko dia LimeWire. LimeWire dia peer-peer rakitra-ny fizarana ny mpivatsy ho ny Java Sehatra, izay mampiasa ny Gnutella tambajotra mba hitady sy hizara ny rakitra. Navoaka sy nampiasàna ny GNU General Public License, Limewire dia ...
Nahoana No Tianao Ny Hampiasa Ny Perl Baiko Soratra?
Voalohany namela ahy hiteny aminareo ny tantaran'ny Perl baiko soratra ary avy eo aho dia ho any ho nahoana no mihevitra aho fa Perl dia ny tsara indrindra amin'ny ankapobeny famolavolavolana teny fa misy. Perl dia famolavolavolana fiteny noforonin'ny Larry Rindrina any 1987. Izany dia mifototra indrindra amin'ny famolavolavolana fiteny C nefa koa borrows dia manasongadina ny avy amin'ny maro hafa ny fiteny. Maro ny olona vaovao izany teny mihevitra fa voasoratra PERL ary fanafohezan-teny fa izany dia tsy marina ny anarany sy ny fomba izay insiders amantarana jorom-tany ity ...
Safidy Tranonkala Browsers Inona No Hanavaka Ny Safidy?
Amin'ny rehetra ny fiarovana woes sy an'izany mpampiasa-unfriendly olana mifandraika Microsofts Internet Explorer, mihamaro ny olona mitady alternatives. Aterineto surf mitady hivoaka ny vaovao mpitety tranonkala safidy no tsara vitsivitsy hanavaka ny safidy mba mihevitra, ary soa ihany fa, rehetra browsers ao anatin'io sokajy io boast tsara marika manokan'ilay sy ny mahafinaritra dia manasongadina fa afaka manao anyones diarin'ny fitetezana ny traikefa tsara iray. Tamin'ny farany, ny miakatra aminao mba misafidiana iray izay fits ny mila manokana, toy ny rehetra...
Inona No “[object Window]” Ary Tokony Aho Nametraka Azy?
An-tserasera an-trano ireo tompona fandraharahana miankina amin'ny zavatra maro samihafa software fitaovana mandrindra ny roa ireo vohikala sy ireo fomba fiasa amin'ny biraon'ny. Izy ireo fa tsy ho ela dia lasa heniky ny asa raha tsy automate faritra samihafa ao ny anjara asan'izy ireo.
Mavitrika Rakitra Mampitaha – Manao Ahoana Izany
Fo Rakitra Fampitahana Software. Rakitra fampitahana dia ireo eny amin'ireo fanoharana roa ireo rakitra amin'ny rafitra. Raha ampitahaina ny rakitra manaiky ny fanombanana sy ny fampitahàna ny PDF, Roa sy ny tahirin-kevitra MS. Ny vokatra no hampiseho ny mpampiasa izay mamadika ny mety ho ampiasaina ho feno asa ao amin'ny tambajotra sy mba automate fanitsiana mifehy ny fombafomba. Rakitra fampitahana software dia natsangana manodidina ny diff sy cmp fandaharana. Ny rindrambaiko miasa araka ny hamahana ny Ela Iraisana Subsequence ([object Window]) eo anelanelan'ny roa ireo. [object Window].
Mianatra Ny Fomba Hamoronana Web Site
Toro-Hevitra Amin'ny Fisafidiana Ny Zo Amin'ny Fiarovana Ny Fakan-Tsary
Ny Fandraharahana Accounting: 7 Dingana Tsara Indrindra Rindrambaiko Vahaolana
Manokana Ny Rindranasa
Mpiadina Mpikaroka Ny Rafi - – Fotoana iray Tavoahangy
Headsets Sy Ny Tena Tombony
Ny Tombontsoa Maka Cs2 Free Sary Magazay Tutorial
Manao Ny Tena Ivelan'ny Sary Iray Toeram-Pivarotana Video Tutorial Inona No Afaka Atolotra?
Nahoana Manofa Laptop Rehefa Afaka Hividy Iray Ka Mora?
Nampiantrano Ecommerce Rindranasa
Zanabolana Tolotra Aterineto Dia Manome Bebe Kokoa Ny Hafainganana
Ny Aterineto – Ny Fomba Ve Aho Hifandray
Fikandrana Macro – Mamorona Macros Mba Automate Iraisana Asa
Software Outsourcing Orinasa
Ahoana no Mba Mitady ny raki-Tsoratra Anatin'ny tahirin-kevitra PDF
Avo Dia Avo Ny Famaritana TVs Lasa Mahazatra